Haweenay heysata dhalashada Norway horeyna ugu biirtay ISIS oo laga soo dejiyey Oslo… – Hagaag.com
Posted on 18 Janaayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Xalay abaarihii saqda dhexe waxaa garoonka diyaaradaha Gardemoen ee duleedka magaalada Oslo laga soo dajiyay haweeneydii dhalashada Norway haysatay balse asal ahaan kasoo jeeday dalka Pakistan ee sannadkii 2014 ku biirtay kooxda ISIS ee dalka Suuriya.
Sirdoonka Norway ee loo yaqaan PST iyo hay`adda Barnevernet ee xannaaneysa carruurta ayaa garoonka ku sugayay haweeneydan iyo labadeeda ciyaal, waxaana ay la kala boodeen hooyada oo ay sirdoonku kaxeysteen iyo caruurta oo Barnevernet-ka wateen.
Marki ay garoonka kasoo dageen, waxaa loo kaxeeyay isbitaalka Ullevål, halkaas oo lagu hubinayay caafimaadkooda, waxaana la socday boolis ka tirsan sirdoonka PST.
Sirdoonka Norway ayaa bartooda twitter-ka kusoo qoray in ay qabteen haweeneydan oo 29-jir ah ayna ku eedeysan tahay dambi ah in ay ku biirtay urur argagixiso oo Suuriya ka dhisan.
Wasiiradda arrimaha dibedda Norway ayaa uga mahadcelisay dhammaan dadkii ku lugta lahaa dib usoo celinta haweeneydan iyo carruurteeda, waxaana ay qortay in kiiskan ahaa mid juhdi iyo culeys badan la geliyay.
Haweeneydan ayaa Suuriya ugu dhashay labada carruur mujaahid ISIS ah xilli ay ku biirtay dagaalyahannadii ku sugnaa dalka Suuriya ee khilaafada Islaamka.
Markii kooxda ISIS lagu jabiyay dagaalkii Suuriya bartamihii sano hore ayaa waxaa ay haweeneydan iyo kuwo kale oo carruuro sita islamarkaana haysta dhalashooyin reer galbeed ah kasoo muuqdeen kaam loo sameeyay barakacayaasha.
R/wasaaraha Norway Erna Solberg ayaa xilligaas sheegtay in wixii dad waaweyn ah ee dhalashada Norway haysta ee kaamkaasi ku sugan aan lasoo wadi doonin.
Kadib cadaadis uga yimid waddamo dhowr ah ayaa waxaa ay ku khasbanaatay dowladda Norway in ay ka laabato go’aankaasi islamarkaana ay kaxeysato muwaadiniinteeda.